M Xasan Maxamed: “Is-aamin-darrada ina dhextaal daranaa!” (Qormo) – Radio Daljir
Maarso 8, 2019 4:03 g 3
Dhibaatada ugu daran ee bulshada Soomaaliyeed ka haysata dawladnimada tan ugu daran aniga waxaan ku sheegi lahaa is-aamin-darrada dhextaal dadka. Taas waxaa weheliya oo sidoo kale ah dhibaato soo siyaadday in shaqooyinka loo dhiibo dad aan inta badan shaqada u lahany xirfad.
Waagii hore waxaan maqli jiray maahmaah ahayd: “Waxaan gaajaa ii geysay ee ma anaa aqaan!”
Maahmaahdaas waxa ay ku baxday nin xoolo raacato ah, aqoontiisuna salka ku haysay dhaqista xoolaha oo magaalo soo galay, waxaa la arkay isaga oo ka shaqaynaya goob farayaamo, markaas baa la yiri “shaqadaan ma horaad u taqaanay?” Wuxuu ku jawaabay, maahmaahdaas aan kor ku xusay.
Dulucda aan ka leeyahay waxaa weeye qofka shaqo dawlad ama mucarad ama meel kale ka haya waxaa wanaagsan inuu xirfad u leeyahay, haddii ay haysato xirfad yaraanna ugu yaraan uu ku daro anshax iyo deganaan oo uusan wax kasta faraha la gelin.
Arrintii booqashada Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu ku tegey Kenya waxay ku saabsanayd waxaa ka hadashay Madaxtooyada Soomaaliya oo tiri, “marna gorgortan kama geleyno arrinta muranka badda, waxaan u daynaynaa maxkamadda caalamiga ah ee kiiska gacanta ku haysa.”
Lama rumaysan Madaxtooyada Soomaaliya oo waxa aad arkaysaa wariyayaal warkii u dhigaya, “dawladda Soomaaliyeed weli hadal kama soo saarin shirka labada madaxweyne ee Kenya iyo Soomaaliya, laakiin afhayeenka madaxtooyadu wuxuu yiri …”
Malaha wariyayaashu iyo mucaraadku Afhayeenka Madaxtooyada waxa ay u yaqaanaan qof, dowladdana wax kale ayey u yaqaanaan. Aan isweydiino e Afhayeenka Madaxtooyadu miyuusan ahayn isha rasmiga ah ee warka dawladda?
Iyada oo qayladii meel kasta isgaartay ayaa wargeysyada gudaha ee Kenya soo qoreen in dawladda Kenya ay ku fashilantay in arrintii badda ay Soomaaliya ka wada hadlaan. Markaas baa xiisaddii Soomaalidu degtay.
Shaki kuma jiro in ay jiraan danley siyaasadeed oo jecel wax kasta oo dawladdu ku dhaqaaqdo in ay ka dhigtaan madane ay ku suntadaan olole siyaasadeed, waxaana meesha ka maqan aaminkii bulsho iyo masuuliyadeed ee saarnayd, taas oo ah in marka ay arrintu noqoto arrimo jiritaanka waddanka taabanaya ay wax kasta oo khilaaf ah dhinac iska dhigaan, xooggana la isugu geeyo difaaca dadeed iyo kan dhuleed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Qarqarsiinta Kenya waa “waxa aan rabo aan helo ama xiriirkeenu wuu xumaan.” Kenya waxa ay rabtana waa xudduudka dhinaca badda in wax laga bedelo siduu yahay. Haddii taas aan yeelnana berri Jubaland ayaa ku xigi doonta, waayo horeba NFD ayaan culays diblomaasiyadeed ku waynay.
Soomaaliya waa waddanka astaanta u ah ruux kasta oo Soomaali ah meel kasta dunida ha kaga noolaadee, dhalasho kasta ha haysto e, waxaana ku waajib ah ilaalinta waddanka, waana taas tan u baahan in qof kasta oo siyaasi ah, weriye, aqoonyahan, wadaad iyo qof caadi ahba uu ogaado.
Waxa ay qaadanaysaa wakhti in bulshada maankeedu soo kabto, lana helo is-aamin buuxa oo dhexdeenna ah, waa se in aan dhisnaa innagu taas. Laakiin inta weli ay jirto dhegonuglaan shisheeye waa dhibaato ku taagan is-aaminaadda iyo dawladnimadeena.
WQ: Maxamed Xasan Maxamed
Siyaasadda & Dhaqaalaha 454 Wararka 17239
Michaeljam 9 months
Hi Good front-page news ! an astoundingsacrifice
Eddieagict 9 months
Confirm that you are not a robot, and Behold is a finebonus for victory. http://bit.ly/2ENOS54
Abti yariisoow 9 months
waxaa kugu filan ninka hadlayow
Qofkii ku dharbaaxa hadaadan goobta ugu jawaabin,in la,idiin
Garqaado gurigaaga iyo kiisa MEEL
Kabaxsan, UMADUNA wadajoogto,BAL
Adoo lagu ihaaneeyey in far laguugu yeero waa yaq yaqsi, ee hadana
Inta gadaashaada la istaago lagugu
Qoslo. ( take OR leave it bro )